Ururada Haweenka Puntland oo qodobo kasoo saaray shir ay ku yeesheen magalada Garowe (Akhriso+Sawirro) | Waayaha
You are here: Home 2015 November Ururada Haweenka Puntland oo qodobo kasoo saaray shir ay ku yeesheen magalada Garowe (Akhriso+Sawirro)
Ururada Haweenka Puntland oo qodobo kasoo saaray shir ay ku yeesheen magalada Garowe (Akhriso+Sawirro)
Posted on November 15, 2015 by Ayuub Xudayfi | 0 Comments
15 November, 2015(WN)-Haween ka kala socda gobaladda Puntland ayaa maanta danahooda ku aadan ka qayb galka doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo tan Puntland ee 2019 kaga tashtay shir ballaaran oo ay ku yeesheen xarunta wasaradda Haweenka Puntland ee Garowe.
Shirkan oo saacado socday waxaa soo qaban qaabisay wasaradda Haweenka oo la kaashanaysay xafiiska UN-Woman, waxana ugu danbeyntii laga soo saaray todob qodob oo ay ku cabireen haweenkii kasoo qayb galay aragtidooda ku aadan in la siiyo koondada ay ka lee yihiin kuraasta siyaasada dalka.
Gudoomiyahaasha Haweenka ee gobaladda Puntland ayaa dhankooda sheegay inay u baahan yihiin madaxda dalka inay meel u saaraan qaybta sharciga ah ee ay kaga lee yihiin ka qayb galka siyaasadda dalka.
Wasiirka Haweenka Puntland Aniso Xaaji Muumin ayaa taageertay qodobadda kasoo baxay shirka ay haweenku Garowe ku yeesheen, waxayna sheegtay in ay muhiim tahay dhagaysiga baaqyada iyo guuxa haweenka kasoo baxaya.
Halkan hoose ka Akhriso qodobada kasoo baxay shirka haweenka Puntland.
1.In koondadii dumarku lahaayeen dastuurka dalka lagu daro laguna cadeeyo 30% ah.
2.In nidaamka doorashada uu noqdo mid ku salaysan degmooyin.
3.In Bulshada, Dowladda,Culimada, Urarada rayidka ah iyo hay,adaha caalamiga ah ay ka qayb-qaataan habkii loogu taageeri lahaa haweenka hankooda siyaasadeed.
4.In wasaaradda haweenka iyo cadaalada ay hubiyaan in la fuliyey ama ay heleen qayb-tii haweenku lahaayeen.
5.Waa in la mideeyo daladdaha u ololeeya Haweenka iyo ka qayb-qaadashada siyaasada.
6.In warbaahinta dowladdu ay u samayso haweenka Barnaamijyo joogto ah oo lagu xoojanayo codkooda.
7.In odayaasha dhaqanka lagu wacyi-galiyo taageeridda haweenka ka qayb-qaadanaya Siyaasada.
8.In haweenka bartaan shareecada Islaamka iyo qawaaniinta si ay u fahmaan waxa waajibka ku ah.
9.In dhamaan bulshada lagu wacti-galiyo in kaweenka aanay xuduud qabiil lahayn cid kastana ay matali karaan.
10.In la kordhiyo wakhtiga iyo tayada tababarada gabdhaha iyo haweenka loo fidiyo si ay uga faa,iidaystaan ka qayb-qaadashada Siyaasada.